विरामीको सेवा छाडेर विदेशिनै पर्ने हो ? - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
विरामीको सेवा छाडेर विदेशिनै पर्ने हो ?
- कर्निला खड्का
नेपाल सरकारले सबै जिल्ला अस्पतालहरुमा फार्मेसी सेवा पनि संचालन गरिरहेको छ । फार्मेसीलाई अनिवार्य पनि बनाएको छ । तर फार्मेसीलाई हेर्ने दृष्टीकोणमा किन यति कुन्जुस्याँइ गरिरहेको छ ? यतिबेला यसको बारेमा बहस गर्न जरुरी छ । बास्तवमा सरकारले फार्मेसीहरुबाट जुन खालको अपेक्षा गरिरहेको छ तर सेवामा जनशक्तिको विकास गर्नमा कन्जुस्याँइ गरिरहेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा चिकित्सक, नर्स र फर्मासिष्टको भूमिका अग्रपङ्तिमा छ । यि तीनवटै पेशाका बाहेक अन्य स्वास्थ्यकर्मीले आ-आफ्नो क्षेत्रमा महत्वपुर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रहेर काम गर्ने हरेक पेशाकर्मीहरुले एकले अर्काको सम्मान र आदर गर्ने बानीको विकास भइसकेको छ । तर फर्मासिष्टको बारेमा सरकारले वास्ता गरिरहेको छैन ।
खासगरि स्वास्थ्य क्षेत्रका अन्य पदहरुमा धमाधम बिज्ञापन खोलीरहँदा फर्मासिष्टहरु एक दुई जना मात्र खोलीरहेको छ । सबै अस्पतालमा फार्मेसी सेवा अनिवार्य बनाउने तर जनशक्ति किन यसरी कम मात्रामा मागीरहेको छ ? फार्मेसीका लागी कति धेरै लगानी लगाएर सामान्य मानिसहरुले आफ्ना छोराछोरी लाई पढाइरहेका छन् खोइ सरकारले बुझेको ? सरकारको एउटा अनौठो र बुझ्न नसकिएको कुरा त झन के छ भने ३/४ सय दरबन्दीका हेल्थ असिस्टेन्ट, अहेव र अनमिले फर्मासिष्टको काम गरिरहेका छन् । उनीहरुलाई खटाइएको छ । के यो फार्मेसी सेवा सरकारले अनिवार्य बनाउँदा जनशक्ति नपाएको हो त ? या फर्मासिष्टहरु उनीहरुलाई नै मानेको हो ? सरकारका ठुला ठुला निकायका बौद्यिक जनशक्तिले कमसेकम फार्मेसी सेवा र स्वास्थ्यको अन्य सेवामा जनशक्ति त फरक फरक चाहिन्छ भन्ने बुझेर बुझ पचाइएको हो ? यसका बिषयमा चौतर्फी बहस यतिबेलाको आवश्यकता हो ।
सरकारलाई यसका बिषयमा गम्भीर रुपमा ध्यानआर्कषण गराउनुपर्ने देखिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका अन्य पदहरुमा ४०० दरबन्दीको लागी दरखास्त खोलिँदा फार्मेसीमा ४ जना मात्र खोलिन्छ यो किन ? चित्त बुझ्दो जवाफ सरोकारवाला निकायसँग छैन । सरकारले करारमा पठाएको फर्मासिष्टहरु यतिबेला उनीहरुको आचारसंहिता भित्र रहेर काम गरिरहेका छन् । उनीहरु आचारसंहिता भित्र रहेर पनि अस्पताल भित्रका अन्य कामहरु पनि गर्न बाध्य छन् । फार्मेसीमा नीतिगत प्रावधानहरु नभएको हुन् या भएर पनि नीतिगत प्राबधान भित्र राख्न नखोजेको हो यसका बारेमा बुझ्न मुस्किल भइरहेको छ । फार्मेसी पेशालाई सेवामुखि नभएर नाफामुखी हिसावले हेरिएको हुन्छ र फार्मेसी जनशक्तिलाई व्यवहारमा अपहेलनाको पात्र बनाइएको छ । उनीहरुलाई कि त भोलेन्टियरको भूमिकामा राखिन्छ कित ज्यालादारीमा राखिएको हुन्छ । औषधी उत्पादन देखी प्रयोगमा ल्याउने प्रक्रियासम्म फर्मासिष्टको महत्वुपर्ण भूमिका रहन्छ ।
सबै तिर समान सहभागितामुलक रुपमा सरकारले घोषणा गरे अनुसारको स्वास्थ्य सेवालाई बिस्तार गर्ने हो भने स्वास्थ्य संस्थाहरुमा फर्मासिष्टको अनिवार्य दरबन्दी खडा गरिनुपर्छ र त्यही अनुसारको प्रतिस्पर्धामा फार्मेसी पढिरहेकाहरुले गर्नेछन् । हाम्रो मुलुकमा पछिल्लो समय फार्मेसी पढ्नेको लर्काे लागेको छ तर उनीहरुलाई पढाउनका लागी अभिभावकले कति खर्च जुटाउनु परेको छ भन्ने कुरा अभिभावकलाई मात्र थाहा होला । आफ्ना छोराछोरीले भविष्यमा फर्मासिष्ट बन्ला भन्ने ध्ययका साथ छोरा छोरीलाई लगानी गरिरहेका हुन्छन् तर सरकारले भने फार्मेसी पढ्नका लागी जुन खालको सचेतना जगाइरहेको छ त्यही अनुसार दरबन्दी सिर्जना गर्न सकिरहेको छैन । यस तर्फ सम्बन्धीत निकायको ध्यान जान जरुरी छ । नेपालमा फार्मेसी सेवाप्रति जनचेतनाको अभाव छ । सँगसँगै सरकारी उदासिनताका कारण फार्मेसी क्षेत्रमा देखिएका विकृति विसंगति कम हुन सकेको छैन । ठोस नीति नहुँदा र नियामक निकायले बेवास्ता गर्दा फार्मेसी सेवाको भूमिका नेपालको स्वास्थ्य सेवामा त्यति प्रभावकारी देखिएको छैन ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय, औषधि व्यवस्था विभाग, नेपाल फार्मेसी काउन्सिल, उपभोक्ता मञ्च, फर्मासिस्टहरु सबैले फार्मेसी पेशाको मर्यादालाई बुझेर काम गरिदिएमा फार्मेसी क्षेत्रको विकास सम्भव छ । सरकारी स्तरमा पनि जिल्ला, अञ्चल, क्षेत्रीय तथा केन्द्रीय अस्पताल, औषधि व्यवस्था विभाग, क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयसँगै संघीयतामा हुने सम्पूर्ण स्वास्थ्य संरचनामा अनिवार्य फार्मेसी जनशक्तिको पद सिर्जना गरी सरकारीस्तर बाटै फार्मेसी जनशक्तिको उपयोग गर्ने नीति लिनुपर्छ । सरकारी संयन्त्रमा फार्मेसी जनशक्तिको उपस्थिति बलियो भयो भने मात्र निजी क्षेत्र पनि त्यसलाई अनुशरण गर्न वाध्य हुन्छन् यसले मात्र नेपालमा स्वास्थ्य सेवाको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध मजबुत हुन्छ । होइन भने, जनताले उचित परामर्श र गुणस्तरीय औषधि सेवा पाउन मुश्किल पर्नेछ । स्वास्थ्य सेवामा औषधिको क्षेत्रलाई विश्वसनीय र गुणस्तरीय बनाउन फार्मेसी अध्ययन गरेका जनशक्तिलाई प्रयोगमा ल्याउन नसके बिरामीको स्वास्थ्यमा असर पर्नुका साथै अब्बल जनशक्ति अवसरको खोजीमा विदेशिन वाध्य हुने छन् ।